नरेन्द्र रौले, माघ ५, २०७४
झापाको दमकबाट सन् २०१० मा काठमाडौं उक्लिएकी मेघनामा यो आत्मविश्वास त्यसै आएको भने होइन । उनले संघर्षका धेरै घुम्ती पार गरेकी छिन् । दमक मल्टिपल क्याम्पसबाट म्यानेजमेन्टमा प्लस टु उत्तीर्ण मेघना दमकमै बसेर केही गर्न चाहन्थिन् । १६ वर्ष पुग्दा उनले अकल्पनिय दुर्घटना बेहोर्नुपर्‍यो । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ ५, २०७४
मैले बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढेको थिएँ । त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको जीवनी पनि पढियो । म उहाँहरूको सरल व्यक्तित्वबाट प्रभावित छु । सामान्य व्यक्ति पनि पछि गएर ठूलो ओहदामा पुग्न सक्ने रहेछन् जस्तो लाग्यो । पुरा पढ्नुहोस्
अमेरिकाकी गायिका टेलर स्वीफ्ट संसारमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने महिला पप स्टार हुन् । उनले वर्ष २०१७ मा लगभग १७ करोड डलर कमाएकी छिन् । फोब्र्स पत्रिकाले वर्षभरी सर्वाधिक कमाउने महिलाका रूपमा उनको नाम उल्लेख गरेको छ । यसअघि यो कीर्तिमान केटी पेरीको नाममा थियो । पुरा पढ्नुहोस्
रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष), माघ ५, २०७४
प्रेमी–प्रेमिकासँगको मनोरञ्जन अविस्मरणीय क्षण बन्नेछ । आफूले मन पराएको साथीको भावनाको कदर गर्नु उचित हुन्छ । खानपान तथा मनोरञ्जनमा संयमित रहनु नै उपयुक्त होला । मौसम प्रतिकूल हुँदा स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ । साताको अन्त्यतिर आर्थिक भार बढेर ऋणको चपेटामा पर्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डेढ दशकअघि निखिल उप्रेतीले चलचित्र ‘पिँजडा’बाट अभिनेताका रूपमा आफ्नो करियर थालेका थिए । त्यतिबेला कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको साततले भवनबाट फाल हालेर साहसिक स्टन्ट गरेका निखिलले त्यसपछि आफुलाई ‘एक्सन हिरो’कै रूपमा स्थापित गर्दै लगे । पुरा पढ्नुहोस्
मितेरी गाउँ रमाइलो छ । कोही कसैको मीत त कोही कसैको । मीतैमीतहरूको रमाइलो गाउँमा सौगात र विपिन सौतेनी दाजुभाइ हुन्छन् । सौगात आफ्नो साथी कामेश्वरसँग गाउँमा मस्ती गर्दै हिंडछ । उसले गाउँमा आएकी एउटी युवती मेरुना मगरलाई औधी मन पराउँछ । पुरा पढ्नुहोस्
उक्त फेस्टिभलमा सांगीतिक प्रस्तुतिसहित म:मका विभिन्न १५ भेराइटीका साथ ककटेल, स्न्याक्स, केक तथा पेस्ट्री आदिको स्वाद लिन पाइनेछ । प्रत्येक टिकटमा एक प्लेट म:म उपलब्ध हुने यो फेस्टिभलमै यो शनिबारको बिदा मनाउने हो कि ? पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, माघ ५, २०७४
वीर्यमा भएका शुक्रकीटमा हुने प्रजनन क्षमताका कारण त्यसले विशेष स्थान पाएको छ । वीर्य निर्माणमा धेरै रगत चाहिने भएकाले वीर्य जोगाउनुपर्ने विश्वास धेरै समाजमा पाइन्छ । वीर्य खेर गए पुरुष कमजोर हुन्छ भनिन्छ, तर यसको वास्तविकतालाई पनि हेरौं । पुरा पढ्नुहोस्
सोनाम ल्होसारको अवसरमा बैदाम तामाङ समाजले आयोजना गर्ने ल्होसार म्युजिक फेस्टिभलको मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत हुन लागेका घिसिङले आफ्ना चर्चित गीतहरू सुनाउनेछन् । पुरा पढ्नुहोस्